CIVICUS: Fandinihana ny tanjaky ny fiaraha-monim-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Andrea Arzaba
Voadika ny 18 Oktobra 2011 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, 日本語, Español
Nandritra ny telo andro dia solontena avy amin'ny fiaraha-monim-pirenena maro no nivory tany Montreal, Canada nanatrika ny Fihaonana an-tampon'ny CIVICUS hiady hevitra momba ny làlana rehetra hanairana ny olona, miainga avy amin'ny hetahetan'ny tsirairay.
Paul McAdams nanoratra ity eritreriny ity an-taratasy nosoratany ho an'ny zanany. Nomeny ny anarana hoe “Afaka manao mihoatra ianao”:
Anna Mazgal milaza ao amin'ny sorany “Ny karazana holatra rehetra”:
Ao amin'ny lahatsoratra “Raha mahaleo tena kokoa ny fiaraha-monina mahantra“, nosoratan'ny iray amin'ny mpikarakara, no ahitana hevitra mahaliana:
Farany, ao amin'ny blaogy amin'ny teny frantsay, Sophie Verdon mizara amintsika ny namehezany azy:
Santionany kely fotsiny izay. Mahaliana kokoa ny mitsidika ny bilaogin'ny fikambanana sy mandinika izay voalaza ao. Milaza ny heviny ao ny blaogera rehetra amin'ny tenyAnglisy, Frantsay sy Espanola, ao koa ny tweets marobe.
Ny fanantenana dia hoe aorian'ity fihaonana ity dia ho maro ny feo hanohana ny fahafahan'ny olom-pirenena. Matanjaka ny hevitra sy ny traikefa rehefa zaraina, tahaka ny hitantsika teo aloha. Afaka manampy ireo rehetra tsy afaka nanatrika ny fihaonamben'ny CIVICUS ny teknolojia : azonao jerena eto ny lahatsary nandritra ny valandresaka. Misokatra ny tahalam-bahoaka, enga anie ka ho betsaka ny hevitra mivoaka!